Huawei ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်သည်စမတ်နာရီများနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာကိုဆိုလိုသနည်း Androidsis
ဟိုဆေး Alfocea | | NOTICIAS, စမတ်နာရီ
ငါသတင်းကိုဖတ်သည့်အခါ“ Huawei သည်စမတ်နာရီနှစ်ခုကိုလွှင့်တင်ခဲ့သော်လည်းသူတို့၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်အနေဖြင့်၎င်းတို့ဘာကိုအလိုရှိသည်ကိုမသိသေး” ဟုခေါင်းစဉ်တပ်ထားခြင်းကသိသာထင်ရှားစေသည်။ သို့သော်အဲရစ် Xu Zhijun ၏စကားများသည်အမှန်တကယ်ပင်ထင်ဟပ်နေသည် စမတ်နာရီသည်၎င်း၏နေရာကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်.
အမှန်စင်စစ် Huawei ကုမ္ပဏီသည် Android Wear ဖြင့်စမတ်နာရီနှစ်ခုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းမှာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် Huawei Watch နှင့်မကြာသေးမီက Huawei Watch 2015 တို့ဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏စီအီးအိုသည်စမတ်နာရီစက်မှုလုပ်ငန်းအောင်မြင်မည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချပုံမရပါ.
သတင်းအချက်အလက်အရသိရသည် ထုတ်ဝေခဲ့သည် ထဲမှာ South China Morning Post က, Huawei ၏အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာ Eric Xu Zhijun သည်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်သူများ Huawei 2017 ၏မူဘောင်တွင်ကြေငြာလိမ့်မည် "စမတ်ဖုန်းတွေရှိရင် smartwatches ဆိုတာဘာလဲဆိုတာအမြဲတမ်းစိတ်ရှုပ်နေတယ်".
တကယ်တော့၊ Zhijun ကကုမ္ပဏီမှစမတ်နာရီကိုဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့ကသူ့ကိုသတင်းပို့တဲ့အခါတိုင်းသူကအသင်း ၀ င်တွေကိုသတိပေးရမည် ဤအမျိုးအစားအတွက်စျေးကွက်တွင်အမှန်တကယ်လိုအပ်ချက်အချို့ရှိရမည်.
ထို့ကြောင့် Eric Xu Zhijun သည်စမတ်နာရီများအတွက်ယခုအချိန်တွင်လိုအပ်ချက်ရှိသည်ဟုမယုံကြည်နိုင်ပါ။ Huawei သည်အဆိုပါထုတ်ကုန်နှစ်ခုကိုစတင်မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း Huawei ၏စီအီးအို၏ထင်မြင်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ခဲ့သလိုထင်သလောက်မဝေးလှပါ စမတ်ဖုန်းထုတ်လုပ်သည့်ကုမ္ပဏီများ၏လေ့လာသုံးသပ်သူများနှင့်အမှုဆောင်အရာရှိများစွာသည်အံ့ still နေဆဲကိုထင်ဟပ်နေသည်: စမတ်နာရီများကအများပြည်သူအားစမတ်ဖုန်းများကဲ့သို့အကြီးအကျယ်သိမ်းပိုက်သွားမှာလား။
Huawei ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်မှယနေ့ထုတ်ပြန်ချက်များသည်၎င်းကိုပြသသည် စက်မှုလုပ်ငန်းသည် smartwatche အစိတ်အပိုင်းအတွက်မှန်ကန်သောနယ်ပယ်ကိုရှာဖွေနေဆဲဖြစ်သည်စမတ်နာရီများ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Huawei ၏စီအီးအိုသည်စမတ်နာရီများကဘာတွေလဲ
ဒါဟာသူတို့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်စမတ်ဖုန်းတွေရှိရင် smartwatches အသုံးပြုမှုကိုငါမတွေ့ဘူး ... ပြီးတော့ငါအဲဒါကိုထောက်ခံတယ် .. သူတို့ကအမြဲတမ်းရယ်နေသလိုပဲ
ယွာဘ ramos ဟုသူကပြောသည်
ယွာဘ Ramos ကိုပြန်ပြောပါ
လူအများကအဲဒါဘာလဲဆိုတာသိချင်ကြတယ်။ အားသွင်းစရာမလိုသည့်လက်ကိုင်ဖုန်းရှိခြင်း။ ငါဥပမာတစ်ခုထားတော်မူ၏။ ငါ vostok europet worldtimer နာရီကိုကြိုက်တယ်။ ဒါပေမယ့် Samsung Gear ကိုဝယ်ပြီး vostok နဲ့ဆင်တူတဲ့ပုံနဲ့အတူအသားအရေကိုထည့်သွင်းဖို့စဉ်းစားခဲ့တယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏အသုံးပြုမှုအတွက်စမတ်နာရီ၏အားသာချက်များကိုမတွေ့သောကြောင့်အဆုံး၌ကျွန်ုပ်တစ်သက်တာလုံးရေရှည်ခံမည့်နာရီတစ်လုံးထားလို။ ၎င်းကိုအားသွင်းစရာမလိုပါ။ ငါနောက်ဆုံးအနေနဲ့အချို့သောရန်လိုကမ်းလှမ်းမှုအပေါ်အခြေခံပြီးရွေးချယ်လိမ့်မည်ဟုဝန်ခံဖို့ရှိသည်သော်လည်းငါအနာဂတ် Gear အတွက်စိတ်ဝင်စားဖွယ်အသုံးပြုမှုကိုငါမြင်၏။ ငါကတိကျတဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အသုံးပြုမှုများအတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ထင်, ဒါကြောင့်အလွန်တိကျတဲ့ software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုလိုအပ်သည်။ ငါစီအီးအိုကကျွန်ုပ်တို့အများစုတွင်ရှိသည့်သံသယများနှင့်ပြtheနာကိုသတိပြုမိခြင်းကသူ့အားအမှန်တကယ်စိတ် ၀ င်စားသောအသုံးပြုမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေလိမ့်မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
José Francisco သို့ပြန်ကြားပါ
Ulefone Power2ကိုမယှဉ်နိုင်သည့်စျေးနှုန်းဖြင့်ဝယ်ပါ
Motorola သည် Moto C နှင့် Moto C Plus ကိုစတင်မိတ်ဆက်ရန်ပြင်ဆင်နေသည်